ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအထူးကု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Location: နေသာကျွန်းကမ်းခြေ FL US
SIB တီဗီ, SIB ရေဒီယိုနှင့်ဝက်ဘ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအဘို့ပရိုဂရမ်းမင်း၏ဖန်တီးမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ဆောင်စေရန်, SIB TV နဲ့ SIB ရေဒီယို၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ကူညီ; လိုအပ်အဖြစ်ကို web နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများနှင့်အတူကူညီ; တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်, မြို့ဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းခြုံပေးသဖြင့်အသက်ရှင်-to-မှတ်တမ်းတင်စီးတီးကော်မရှင်အစည်းအဝေးများ, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဖြစ်ရပ်များလိုအပ်သကဲ့သို့, စီးတီးစာပမြေားအတှကျပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုဆည်းပူး။
ဒီအနေအထားတစ်ခုမျှော်လင့်လေးဆယ် (40) နာရီအလုပ်ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူ Non-ကင်းလွတ်ခွင့်, အချိန်ပြည့်အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။
မရှိမဖြစ်တာဝန်၏ Illustrator ဥပမာများ: ဒါကပြည့်စုံစာရင်းအဖြစ်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်အဓိကတာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရား၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်များကိုသာရည်ရွယ်ပါသည်။ လက်ရှိ (s) ကိုစာရင်းအားလုံးတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်အကြောင်းနှင့်အပိုဆောင်း, အနေအထား-သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အပါအဝင်သော်လည်းမ scripting နည်းဖို့ကန့်သတ်, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း, directing, ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်, ရုံးနှင့်လယ်ပြင်၌ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအပြည့်အဝနယ်ပယ် Perform ။
ဝက်ဘ်, ဗီဒီယိုနှင့်ပုံနှိပ်စာပေအားလုံးကို formats များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ဂရပ်ဖစ် ဖန်တီး. အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲနောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့အသံပုဒ်နဲ့ content update များကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲအကြောင်းအရာ, ထူထောင်အမှတ်တံဆိပ် parameters တွေကိုမှကိုက်ညီကြောင်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုအပါအဝင်, အစိုးရ Access ကို Channel ကို SIB တီဗီများ၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်း Assist ။
စာအရေးအသား, အသံဖမ်း, နဲ့ audio content တွေကိုရောစပ်အပါအဝင် SIB ရေဒီယိုများ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲထဲမှာ Assist ။
သင့်လျော်သောသက်ဆိုင်သူများမှထိရောက်စွာစီမံကိန်းကိုအဆင့်အတန်းနှင့်ဘာလဲဆိုတော့အချိန် communicate ။
Assist နှင့်ညှိနှိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်လိုအပ်သောသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာသစ်များ၏နေ့စွဲအသိပညာအထိထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သူတို့၏အလားအလာကလေးမွေးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အကြံပြုချက်များပါစေ။
ကုန်ကြမ်းရိုက်ကူးလေ့လာဆည်းပူးခြင်းအခြေခံမူ, အသံဖမ်း၏အခြေခံမူ, အလင်းရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်များနှင့်တည်းဖြတ်အပါအဝင်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှု၏သီအိုရီများ, လျှောက်ထားအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံကို။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုနှင့်နေဆဲကင်မရာပစ္စည်းကိရိယာ, ရောနှော, Switcher, ဇာတ်ကောင်မီးစက်နှင့်အလင်းရောင်တူရိယာအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများနှင့်အထွေထွေရုံးသုံးစက်ကိရိယာများအပါအဝင်ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံက operating ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုဗွီဒီယိုနဲ့အသံပစ္စည်းကိရိယာများ။
အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်, Premiere Pro ကိုအပါအဝင်, Adobe က Creative Suite အတွက်တတ်ကျွမ်း, နဲ့ Photoshop လိုအပ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာနယ်ဇင်းများတွင်ကျွမ်းကျင်မှုပိုမိုနှစ်သက်သည်။
တစ်ခုစိတ်ကူး conceptualize တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်ထုတ်လုပ်တစ်ဦးစည်းလုံးထုတ်ကုန်သို့တည်းဖြတ်နှင့်အချိန်ပေါ်နှင့်ဘတ်ဂျက်ပေါ်မကယ်မလွှတ်နိုင်စွမ်း။
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ပူပေါင်းပြီးကန့်သတ်ဦးတည်ချက်နှင့်အတူအချိန်များတွင်, လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်အဖြစ်နိုင်စွမ်း; တည်ထောင်ရန်နှင့်ထိရောက်သောအလုပ်လုပ်အများပြည်သူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကို, လုပ်ဖော်နှင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ထားသောအရာရှိများထိန်းသိမ်းရန်။
စီးတီး်ထမ်းများနှင့်ဒေသခံများ၏အဆင့်အားလုံးနှင့်အတူ interface နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ, သမဝါယမလေးစားမှုနှင့်ထောက်ခံဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စွမ်းရည်။
ပုံမှန်ည, တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် non-ရိုးရာအချိန်ဇယားအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်ဘွဲ့ဒီဂရီ မာလ်တီမီဒီယာ, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်သောလယ်; တီဗီထုတ်လုပ်မှုနှစ်ခု (2) နှစ်အတွေ့အကြုံကို; သို့မဟုတ်သင်တန်းနှင့်အတွေ့အကြုံမဆိုလက်ခံနိုင်သောဆက်စပ်ပေါင်းစပ်။
အစိုးရ Access ကိုတီဗီထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းညွှန်ကြားမှု (FAA) ပိုမိုနှစ်သက်မယ့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်; သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အခြောက် (6) လအတွင်းလိုင်စင်ရယူနိုင်စွမ်း။
ဒီအနေအထားကို၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်အကိုင်အလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းမသန်စွမ်းများအတွက်အောက်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ activities.Employee နေရာထိုင်ခင်းဖျော်ဖြေဖို့အလုပျသမားမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအမှု-by-ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာစဉ်းစားလိမ့်မည်:
တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အခြေခံတွင်, စားပွဲခုံမှာထိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ် time.Frequently ၏ရှည်လျားသောကာလအဘို့အရပ်တယ်။ မကြာခဏမြင်ခြင်း, ကြားခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူစကားပြောရန်လိုအပ်သည်။ မကြာခဏဖတ်ပါနှင့် / သို့မဟုတ်လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများ, ရေးဖို့သို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားနည်းလမ်းများမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကီးဘုတ်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သည်။ အခါသမယတွင်တက်သို့မဟုတ်ချိန်ခွင်လျှာ, ကျိုးပဲ့လျက်, ဒူးထောက်, အောက်မှာ, အရသာ, ဒါမှမဟုတ်အနံ့ရန်လိုအပ်သည်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလိမ်များနှင့်ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများကိုရောက်ရှိ; 10 ပေါင်ဖို့နဲ့တက် 40 မှပေါင်အခါသမယအလေးချိန်ပေါ်မှန်မှန် 50 ၏အလေးချိန်ဓာတ်လှေကားသို့မဟုတ်သယ်ဆောင်။ အခါသမယတွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် caustic ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၏အန္တရာယ်နှင့်ထိတွေ့နိုင်ပါသည်။ တိကျတဲ့ရူပါရုံကိုလိုအပ်ချက်များကိုနီးကပ်သောရူပါရုံကို, အရောင်ရူပါရုံကို, အရံရူပါရုံကို, အတိမ်အနက်ကိုအမြင်နှင့်အာရုံကိုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်များပါဝင်သည်။ ရံဖန်ရံခါရုတ်သိမ်းရေးတွန်းအားပေး, ဆွဲ, နှင့် / သို့မဟုတ်အသံ-အမြင်အာရုံကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏အလေးချိန်တင်ဆောင်များအတွက်လုံလောက်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်ညှိနှိုင်းလိုအပ်သည်။
လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-05-18
ယခင်: HPA ဆုပေးပွဲကို Creative အုပ်စုများ Entries ဖွင့်လှစ်ဘို့ Call